Askar dhowr ah oo Qaramada Midoobay ka socota oo lagu dilay dal ku yaal Afrika – Calanka.com
Dibedda / HEADLINE
Askar dhowr ah oo Qaramada Midoobay ka socota oo lagu dilay dal ku yaal Afrika
Qaramada Midoobay ayaa Sabtida maanta ah sheegtay in saddex ka mid ah ciidamadeeda nabad ilaalinta shalay lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, ka dib weerar ay soo qaadeen malleeshiyo hubeysan oo aanan wali la aqoonsan heybtooda.
Bayaan ka soo baxay howlgalka Qaramada Midoobay ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo MINUSCA ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ka soo jeedaan dalka Burundi.
Sidoo kale weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Dekoa, oo 200 km waqooyiga uga beegan magaalada caasimadda ah ee Bangui, ayaa lagu dhaawacay laba askari oo iyana ka tirsanaa howlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay.
Weerarka ayaa ku soo aadaya xilli maalinta berri ah la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah.
Madaxweyne Faustin-Archange Touadera ayaa cambaareeyay weerarkaasi.
Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, oo ah waddan qani ku ah, dhaymanka, dahabka iyo alwaaxa ayaa tan iyo markii uu xorriyadda ka qaatay gumeystihii Faransiiska sannadkii 1960-kii, u soo joogay shan afganbi iyo kooxo kala duwan oo fallaago ah.
Tan iyo sannadkii 2013-kii, wuxuu dalkaasi ku jiray dagaallo sokeeye oo ka dhashay ka dib markii maleeshiyo hubeysan ay talada xoog uga tuurtay madaxweynihi hore Francois Bozize.
Gudaha / HEADLINE
Dowladaha Mareykanka iyo Ingriiska oo ka horyimid muddo kororsiga, kuna hanjabay cuna-qabateyn
VIDEO: Daawo booliska Mareykanka oo bahdilaya askari ka tirsan ciidanka qaranka oo madow ah
Madaxweyne Farmaajo oo soo dhoweeyay sharciga doorashooyinka ee uu baarlamaanka meel mariyay
Xil-ka-qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadaq Joon iyo mid cusub oo la magacaabay
Video / Xulka
VIDEO: Malaay ka yaabsaday malaay-dabato maqaalin la daba-joogtay
VIDEO: Madaxweyne Biden oo saddex mar ku kufay jaran-jarada diyaaraddiisa khaaska ah
VIDEO: Wan duurka Australia ku lumay 5 sano ka hor oo la helay isaga oo dhogor wada qarisay
HEADLINE / Video / Xulka
HEADLINE / Xulka
Fanka / HEADLINE / Xulka
Dibedda / Layaabka / Xulka
Layaabka / Video / Xulka
Calanka.com © 2021. All Rights Reserved.